Semalt: २०२० SEO ट्रेन्ड्स तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ
निस्सन्देह, २०२० प्राय: चुनौतीपूर्ण वर्ष भएको छ। हाम्रो पुच्छरमा कोरोनाभाइरसको साथ, धेरै व्यवसायहरू पतनको बिन्दुमा छन्। तर Semalt होईन, र यो यो किनभने हरेक परिस्थिति एक अवसर बन्न सक्छ। भाग्यशाली वेबसाईटको लागि, कोरोनाभाइरसले धेरै चीजहरू अनलाईनमा बाध्य पार्‍यो। तपाईं हेर्नुहोस्, अवरोध, वेबसाइट, र अनलाइन स्टोरहरूले यसलाई अवसरको रूपमा देख्दछन्।
त्यसोभए हाम्रो प्रश्न यो हो कि, तपाई बरु त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुनेछ जसले इन्टर्नेट ट्राफिकको यस उच्च आवकको उत्कृष्ट प्रयोग गर्दछ, वा तपाईं बसेर रुनुहुन्छ?
यदि तपाईं यस कठिन अवस्थाको सक्दो उपयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई Semalt २०२० प्रवृत्ति थाहा हुनुपर्दछ जसले तपाईंको वेबसाइटलाई उत्तममा परिवर्तन गर्दछ।
पछाडि बस्नुहोस् र आराम गर्नुहोस् जब तपाईंले Semalt तपाईंको जीवन र तपाईंको वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरूलाई परिवर्तन गर्न दिनुहुन्छ। आज सबै जना बोर छन्; हामी हाम्रो घरहरूमा सिमित भएका छौं, हाम्रा साथीहरूबाट टाढा, र धेरै चीजहरू हामी रमाईलो मान्दछौं। नतिजाको रूपमा, प्रायः सबैजना यी दिनहरू इन्टरनेटमा छन्। यो वेबसाइट को लागी तपाइँको साइटहरु मा इन्टरनेट उपयोगकर्ता को संख्या को बढ्दो संख्या को लागी एक अवसर राख्दछ। यसको मतलव तपाईको वेबसाइट को लागी यातायात को बृद्धि गर्न को लागी एक मौका छ तपाईको वेबसाइट रैंकिंग मा सुधार। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवसर हो जुन तपाईं सायद कहिले पाउनुहुन्न।
त्यसोभए तपाईं यसबाट कसरी फाइदा उठाउनुहुन्छ?
सरल उत्तर Semalt को साथ व्यापार मा प्राप्त गर्न हो। Semalt एक वेब विश्लेषण/वेब विकास कम्पनी हो जुन पहिलो पृष्ठमा तपाइँ जस्तो वेबसाइटहरू पाउँदा केन्द्रित छ। हामीसँग धेरै प्याकेजहरू र सेवाहरू छन् जसले तपाईंलाई लागत घटाउने र तपाईंको समग्र राजस्व वृद्धि सुनिश्चित गर्दछ।
विज्ञहरूको रूपमा, हामी रणनीतिहरूको गुच्छामा भर पर्छौं पहिलो पृष्ठमा तपाईंको वेबसाइट प्राप्त गर्न। तर हाम्रो नयाँ र नवीन विधिहरूमा पनि हाम्रो चासो छ। यो भनाइ जाँदा, सब भन्दा चाँडो चराले सबै भन्दा ठूलो कीरा पाउँछन्। एसईओ प्रवृत्तिमा भविष्य सुधारहरू पत्ता लगाउनु भनेको तपाईंको वेबसाईट यी प्रवृत्तिका लागि पहिलो हो। इन्टरनेट संसारमा, सबै कुरा एक दौड हो, तपाई कि त पहिलो पृष्ठमा हुनुहुन्छ, वा तपाईंको वेबसाइट अदृश्य जत्तिकै राम्रो छ। यसलाई रोक्नको लागि, हामी तपाईंको वेबसाइट प्रबन्धन कम्पनीको रूपमा अगाडि रहन आवश्यक छ। यो गर्नका लागि, २०२० का लागि यहाँ केहि SEO प्रवृत्ति छन्।
२०२० को लागि SEO प्रवृत्ति
भ्वाइस खोजी प्रयोगकर्ताले आज जानकारीको लागि कसरी खोजी गर्ने एउटा ठूलो अंश भइरहेको छ। एउटा बाढीको साथ जुन अवरोधहरू पार गर्न द्रुत र कम तनावपूर्ण विधिहरू खोज्दै छ, तपाईं अचम्म मान्नु पर्दैन फोनमा २०% भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू पहिले नै भ्वाइस खोजी विकल्प प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। यसलाई अब ट्रेंड मान्नु हुँदैन तर हाम्रो वास्तविकता।
आज, हामीसँग Google Home र Amazon Echo जस्ता स्क्रिनलेस उपकरणहरू छन्, जसले प्रयोगकर्ताको लागि केवल एउटा खोजी परिणामलाई निर्देशित गर्दछ। यदि तपाईंको वेबसाइट दृश्यता र केवल निलो लिंकहरूमा केन्द्रित छैन भने, यसले भ्वाइस खोजीमा दृश्यता प्राप्त गर्दैन।
स्क्रिनको साथ उपकरणहरूमा भ्वाइस खोजीहरूको लागि, Google ले विकल्प सोच्दछ कि यो राम्रो छ जस्तो लाग्दछ तर अझै पनी अन्य परिणामहरू देखाउँदछ जुन नीलो लिंकहरू छन्। यो एक्लोमा निर्भर गर्न अझै पर्याप्त छैन किनकि धेरै चोटि, प्रयोगकर्ता पछाडि बस्न र सुन्न रुचाउँदछ अन्य परिणामको बारेमा सोच्न अघि।
वर्षौं पहिले गुगलले सहि किवर्ड मिलानबाट टाढा सर्ने निर्णय गर्यो। यो दुबै प्रयोगकर्ता र वेबसाइटहरूलाई मद्दत गर्ने थियो, तर केहि वेबसाइटहरू अझै पनी ढिलो छन्। आजका दिनहरूमा गुगलले शब्दहरूको सहि तारहरू प्रयोग गर्दैन जुन प्रयोगकर्ताले इनपुट गर्दछ। यसको सट्टा, यसले क्वेरी प्रसंगमा केन्द्रित गर्दछ र सम्भावित खोज आशयको विश्लेषण गर्दछ। यस तरिकाले, प्रयोगकर्ताहरू के देख्न चाहन्छन् जुन उनीहरूले आगत गरेनन्।
तलको चित्रमा तपाईले देख्नुहुनेछ कि खोजी स्तम्भमा शब्द गलत हिज्जे छ। यद्यपि खोजी परिणामहरू सहि छन्; यो हामीले भर्खर माथि वर्णन गरेको कुराको कारण हो।
यसले हामीलाई भन्दछ कि गुगलसँग यसको खोजी रुचिको बारेमा राम्रो समझ छ, र यदि तपाईंको वेबसाइट अझै पनी पुरानो स्कूल सामग्री निर्माण विधिमा केन्द्रित गर्दछ जुन एकल कीवर्ड स्ट्रि usesहरू प्रयोग गर्दछ, तपाईं धूलोमा रहनुहुनेछ।
यी एक वेबसाइट मा सामग्री को व्यवस्थित व्यवस्था हो। Semalt सही वेबसाइटहरूमा सही चीजहरू राखेर तपाईंको वेबसाइटलाई मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको आगन्तुकहरू र खोज इञ्जिन क्रलरहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा नेभिगेट गर्न सक्षम गर्दछ। यो सुविधा पछिल्लो तत्व हुनसक्दछ जुन तपाईं हराउनुहुन्छ जब तपाईं आफ्नो वेबसाइटलाई क्रमबद्ध गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर जे भए पनि तपाइँको एसईओ कुञ्जी शव्दहरू जति उच्च छन्, तपाइँको वेबसाइट सही ढured्गले संरचित छैन भने पत्ता लगाउन सजिलो हुँदैन।
गुगलको एल्गोरिथ्म खोजीबाट जानकारी सlects्कलन गर्दछ र यो डाटा प्रयोग गर्दछ तपाईंको साइटलाई क्रमबद्ध गर्न। यो कसरी कार्य गर्दछ कि यदि प्रयोगकर्ताले तपाईंको साइट फेला पार्छ, SERP वा तपाईंको खोजी ईन्जिनहरूले निरीक्षण गर्दछ कि यी प्रयोगकर्ताहरू साइटमा कतिन्जेल रहन्छन्। राम्रो संरचित वेबसाइटले आगन्तुकलाई साइटमा लामो समयसम्म रहन दिन्छ जहाँ कमजोर संरचित साइटले पाठकलाई छोड्छ।
बाउन्स रेट जस्ता अन्य कारकहरू पनि साइट संरचना विचार गर्दा फरक पर्दछ। राम्रो साइट संरचना बाउन्स रेट कम गर्न सक्दछ, र तपाईंको पाठकहरूको निवास समय। जब तपाईं यी दुई कारकहरू संयोजन गर्नुहुन्छ, तपाईंको वेबसाइट स्वत: क्रमबद्ध हुन्छ।
वर्षौंदेखि Google ले एक खोज प्रोजेक्टमा मात्र नभई गन्तव्य बन्न काम गरिरहेको छ। यो दर्शन ज्ञान ग्राफ, द्रुत उत्तरहरू, अन्तर्क्रियात्मक र दृश्य परिणामहरूको साथ सम्भव भएको हो। यसको मतलब यो हो कि गुगल सम्भव भएसम्म खोजका लागि धेरै विधिहरू बनाएर प्रत्येक प्रयोगकर्ताको सेवा गर्न सक्षम हुन चाहन्छ। यी दृष्टि कुनै पनि क्वेरी को एक विस्तृत जवाफ दिन मा पनि योजना।
ज्ञान ग्राफ। यसले सेतो घरको इतिहास, सेतो घरका लागि निर्देशनहरू, र यसका बारे अन्य अन्य जानकारी समावेश गर्दछ।
मानिसहरूले परिणाम बक्स पनि सोध्छन्। यो पनि एक अन्तर्क्रियात्मक बक्स हो। यो अन्य अन्वेषकहरूले सोधेका प्रश्नहरूको साथ आउँदछ, र तपाईं प्रत्येक प्रश्नको उत्तर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
SERP मार्केटिंग खेलमा आउँछ जहाँ यो छ। २०२० एसईओ प्रवृत्तिको मतलब तपाईले आफ्नो पाठमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न रोक्नुभयो। बरु छविहरू, भिडियोहरू र द्रुत उत्तर सेक्सन मार्फत तपाईको एसईओ अनुकूलित गर्न ध्यान दिनुहोस्।
माथि Semalt वेबसाइट, हामीसँग तपाईंको एसईओ प्रदर्शन बढाउन छविहरू र भिडियोहरूको फाइदाहरूको व्याख्या गर्न समर्पित एक लेख छ। यसले भविष्यमा हामी पहिले देखि नै रहेको देखाउँछ। आज, हामी एक विशेष शीर्षक वा प्रश्न खोजी गर्न सक्छौं, तर इन्टरनेटमा उत्तर छैन। त्यस्तो समयमा, हामी आफैंलाई अनुभाग सोध्ने मानिसहरूतर्फ स्क्रोल भइरहेको पाउँछौं। जब हामी मार्फत स्क्यान गर्छौं, हामी हाम्रो सही प्रश्न वा यसको नजिकको प्रासंगिक उत्तरको साथ पर्याप्त नजिक फेला पार्दछौं।
अधिक जानकारी प्राप्त गर्नको लागि त्यस उत्तरमा क्लिक गर्दा तपाईंलाई स्वचालित वेबसाइटमा लगिन्छ। छिटो उत्तर अनुभागमा प्रश्नहरूको उत्तर दिन तपाईको वेबसाइटमा यो कसरी उपयोगी हुन्छ।
एआई को उपयोग
एआई हाम्रो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अंश बन्न गएको छ। आज, हामी यसलाई हामीले गर्ने सबै कुरामा प्रयोग गर्दछौं। वास्तवमा, एआईलाई सबै धन्यवाद छ कि गुगलले प्रयोगकर्ताहरूको खोजीहरूको भविष्यवाणी गर्न सक्दछ त्यसैले यो टेक्नोलोजीको फाइदा लिनु मात्र बुद्धिमानी हो। तपाईको वेबसाइटमा एआई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एसईओ उल्लेखनीय सुधार गर्न। AI हरू ले तपाईलाई अग्रणी खोजशब्दहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ तपाईले आफ्नो वेब सामग्रीमा थप्न सक्नुहुन्छ क्लिकहरूको संख्या बढाउनका लागि। एआई वेब विश्लेषणको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ जुन तपाईंको वेबसाइटमा के गलत हुन सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ। के गलत हो भनेर जानेर, यसलाई सच्याउन हाम्रो लागि सजिलो छ र पहिलो पृष्ठमा तपाईंको वेबसाइट फिर्ता पाउनुहोस्।
कम्पनीको रूपमा, Semalt ले पहिले नै यी सुविधाहरूको फाइदा लिन्छ। यही कारणले हामीले निर्माण गरेका वेबसाइटहरूको गुगलको पहिलो पृष्ठमा पहिले नै स्थान छ। यद्यपि हामी वेबसाइट विश्लेषण र मर्मत पनि चलाउँछौं यदि तपाईंसँग पहिले नै वेबसाइट छ र तपाईं यसमा यी सुविधाहरू चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो टीम तपाईंको वेबसाइट ठीक गर्न इच्छुक छ।
हाम्रो उत्कृष्टताको ट्रयाक रेकर्ड र हाम्रो बर्षे बर्षको अनुभवको साथ, तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ कि थोरै समयमा, तपाईंको वेबसाइट पहिलो पृष्ठमा हुनेछ, तपाईंको प्रतिस्पर्धालाई रातमा बस्न एक कारण दिन्छ।
तपाई अझै पनी के गर्दै हुनुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहोस् र खाता सिर्जना गर्नुहोस् र हामीलाई तपाईंको साइटमा अचम्मका कामहरू हेर्नुहोस्।